Burmese Blog Archives - Page2of2- Aung Hein The Blogger
Home » Burmese Blog
SEO လေ့လာဖို့ အတွက် သင့်လျော်သော SEO Resource များ
Posted by aunghein — August 10, 2018 in Burmese Blog
SEO လေ့လာဖို့ အတွက် blog တွေ၊youtube channel တွေ၊group တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအများကြီးကို အကုန်လိုက်လေ့လာဖို့ အတွက် အဆင်မပြေပါဘူး။ ဆရာများသားသေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လေ့လာတဲ့ပုံစံနဲ့ သင့်တော်မယ့် resource တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ရပါမယ်။ တစ်ယောက်အတွက် သင့်လျော်ပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်ကတော့ သင့်လျော်ချင်မှ သင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ လေ့လာတဲ့ပုံစံ approach မတူလို့ ပါပဲ။ ကျွန်တော် SEO စလေ့လာတုန်းကလည်း youtube video တွေအကုန်လိုက်ကြည့်၊blog တွေအကုန်လိုက်ဖတ်နဲ့ ရွာလည်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှ ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမယ့် resource တွေကို ရှာတွေ့ပြီး အဲ့ဒီတွေကပဲ အဓိကလေ့လာပါတော့တယ်။ တစ်နေရာတည်းကနေ အကုန် လေ့လာဖို့ ခက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ SEO အပိုင်းအားလုံးကို ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ နည်းလို့ ပါ။ On page…
Posted by aunghein — August 6, 2018 in Burmese Blog
Blog ရေးချင်တဲ့သူတွေ အတွက် စဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုက ဘာ blog platform သုံးမှာလည်းဆိုတာပါပဲ။ အသုံးအများဆုံး platform ၂ ခုကတော့ Google ရဲ့ product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ blogspot နဲ့wordpress ပါပဲ။ ဒီ post ကို ကျွန်တော့် ကြုံတွေခဲ့တာတွေပေါ်မူတည်ပြီး ရေးမှာပါ။ ဒါကြောင့် အကုန်ပြီးပြည့်စုံချင်မှ ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် ၂၀၁၄ မှာ blog ဆိုတာကိုစပြီးစိတ်ဝင်စားပြီး စလုပ်ဖြစ်တော့ blogspot နဲ့ ပါ။ Free ရတယ်ဆိုပြီး blog တွေမျိုးစုံထောင်ကြည့်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေတယ်။…
Posted by aunghein — August 5, 2018 in Burmese Blog
SEO မှာလည်း hacking နည်းတူ Black Hat Vs White Hat SEO ဆိုပြီးခွဲခြားထားတာရှိပါတယ်။ Search Engine မှာ Ranking ကောင်းဖို့ အတွက်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းပေါ်မူတည်ပြီး Black hat နဲ့ White hat ကွာခြားတယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့် ရည်ရွယ်ခြင်းလည်း ကွာခြားပါတယ်။ Back Hat သမားတွေကတော့ website ကို SERP မှာ မြန်မြန်တက်အောင်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံမြန်မြန်ရဖို့ ရည်ရွယ်ကြပါတယ်။ White hat သမားတွေကတော့ နည်းလမ်းမှန်အတိုင်းသွားပြီး အချိန်ပေးကာ Search engine မှာ…
SEO အစိတ်အပိုင်းများ (types of SEO)
Posted by aunghein — August 2, 2018 in Burmese Blog
ကျွန်တော်တို့ ပြောနေ၊လေ့လာတဲ့ SEO ကို အစိတ်အပိုင်းတွေပြန်ခွဲထားတာရှိပါတယ်။ SEO expert လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေမှာ အဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကို နှံ့ စပ်တဲ့သူရှိသလို တစ်ပိုင်းချင်းဆီကိုပဲအထူးပြုလေ့လာထားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအပိုင်းတွေ အားလုံးပေါင်းမှသာ SEO ကောင်းတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ အဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကဘာတွေလဲ။ ၃ ပိုင်းရှိပါတယ်။ On page SEO, Off Page SEO, Technical SEO ပါ။ (photo Source: https://unamo.com/blog/seo/technical-seo ) On Page SEO On Page SEO ဆိုတာကတော့…
AdSense Approve ရပြီးလျှင်ရပြီးခြင်း လုပ်ရမည့်အရာများ
Posted by aunghein — July 27, 2018 in Burmese Blog
အရင်အပတ်က AdSense လျှောက်ရာမှာ အထောက်အကူပြုမယ့်အချက်များကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အခုရေးချင်တာကတော့ AdSense approve ရပြီးဆိုလျှင်အရေးတကြီးလုပ်စရာများရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို အချိန်မှီပြုလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်လျှင် ကျွန်တော်တိုင်ပတ်သလို တိုင်ပတ်ပါလိမ့်မယ်။ Address Verification AdSense စလျှောက်ပြီးဆိုရင် အကောင့်ပိုင်ရှင်နာမည်နဲ့လိပ်စာထည့်ပေးရပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ကိုယ့်နာမည်ရင်းကိုမထည့်မိပဲ အိမ်နာမည်ကိုပဲထည့်တာဖြစ်ဖြစ် nick name ကိုပဲထည့်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်မိတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လိပ်စာကိုလည်းအပြည့်အစုံမရေးပဲ ရပ်ကွပ်နာမည်၊ လမ်းနာမည်လောက်ပဲရေးလိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ AdSense approve ရပြီဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက အဲ့ဒီ လိပ်စာကို စစ်ဆေးရမှာပါ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ AdSense ကနေပိုက်ဆံစ၀င်ပြီး 10…
What is SEO? SEO ဆိုတာဘာလဲ?
Posted by aunghein — July 24, 2018 in Burmese Blog
What is SEO? SEO ဆိုတာဘာလဲ။ SEO SEO နဲ့ပြောနေကြတာတွေ့မှာပါ။ အရှည်ကောက်ကတော့ Search Engine Optimization လို့ ဆိုပါတယ်။ အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုကြည့်ရင်တော့ Search Engine ကုို ကိုယ့် website ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး အလေးပေးဖော်ပြဖို့ အတွက် website ကို Search Engine ကြိုက်မယ့် ပုံစံပြုပြင်ပြင်ဆင်ရတာလို့ အလွယ်တကူ ပြောလို့ ရပါတယ်။ Search Engine ဆိုတဲ့နေရာမှာ goolge တင်မကပဲ အခြား အရေးပါတဲ့ နှစ်ခုက Bing နဲ့ Yahoo…
Google AdSense approve ရဖို့ အတွက်အထောက်အကူပြုသည့်နည်းလမ်းများ
Google AdSense approve ရဖို့ ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။ ဒီpost ကို ကျွန်တော် AdSense လျှောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးရေးထားတာပါ။ AdSense ကို ၂၀၁၅ လောက်ကတည်းကျွန်တော်စပြီးလျှောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တာက Myanmar Celebrities website admin ကြီးကို အားကျပြီး လျှောက်ခဲ့ဖြစ်တာ။ သူနဲ့တွေ့ပြီးမှ AdSense ဆိုတာကို သိခဲ့တာပါ။ စလျှောက်တော့ blogspot website တစ်ခုထောင်ပြီး post ၁၀ ခုလောက် ဖန်တီးပြီးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းမှာနေတုန်းက လျှောက်တာပါ။ approved မရပါဘူး…ဘယ်ရမလဲ… post တွေအားလုံးက မြန်မာလိုရေးထားတာကိုး။ ပြီးတော့ website မှာ AdSene ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမပြည့်စုံဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ…